Mongo DataBase အကြောင်း — MYSTERY ZILLION
Mongo DataBase အကြောင်း
December 2014 edited December 2014 in Database
ကျွန်တော်တို. MZ Forum က Mongo DB နဲ. experience ရှိသူများခင်ဗျား !
URL for Mongo DB
ကျွန်တော် ယခုလ မတိုင်ခင်ထိ တောက်လျှောက် MySQL ကိုပဲ သုံးလာတာပါ။ အခု Technology changes အရ MongoDB နဲ. တွဲသုံးရမှာမျိုးလေးရှိလာပါတယ်။ အတွေ.အကြုံရှိပြီးသား ဂုရုများက အကြံဉာဏ် ၊ အတွေ.အကြုံ ၊ လိုက်နာစရာ ၊ ရှောင်ကြဉ်စရာ ၊ သိထားစရာလေးများရှိရင် ဆွေးနွေးပေးကြပါဦးလို. လေးစားစွာတိုက်တွန်းပါတယ်။
ကျွန်တော်တို. Mongo နဲ. ဘယ်လိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုချင်တာလဲ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို.က နှစ်ခုထားမှာပါ ။ MySQL + Mongo ပေါ့ ။
INSERT , UPDATE , DELETE တွေအတွက် Mongo မှာကော MySQL မှာပါပြုလုပ်မှာပါ။
SELECT အတွက်ကိုတော့ Mongo ကနေပဲ ပြုလုပ်မှာပါ။
Performance အတွက်ပါ။ Mongo က ရဲ. Schemaless နဲ. BSON format ပုံစံသိမ်းတာ တွေကြောင့် Querying လုပ်တဲ့ နေရာမှာတော်တော်လေးသိသာတယ်လို.ထင်ပါတယ်။ ကျယ်ကျယ်ပြန်.ပြန်.တော့ကျွန်တော်မသိသေးပါ။ record သုံးသိန်းလောက်ကို MySQL နဲ. Mongo နဲ.ယှဉ်ကြည်.တဲ့အခါမှာ တော်တော်လေး ကွာခြားပါတယ်။ ဒါကလည်း MySQL Query အပေါ်တော့မူတည်မယ်ဆိုတာတော့သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် MySQL querries တွေအနေနဲ.လည်း အကြိမ်ကြိမ် စစ်စေး စမ်းသပ်ပြီးသားပါ ။ performance အတွက်။
MySQL ကိုလည်း မစွန်.ပယ်ပါဘူး။ တစ်ချို.တစ်ချို.သော အရာတွေကတော့ MySQL ကိုပဲ ဆက်သုံးပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုရင် access နည်းတဲ့ အရာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ MySQL နဲ.ပဲ သုံးပါတယ်။ User create လုပ်တာမျိုး ၊ သက်ဆိုင်ရာ information တွေထည်.တာ ၊ ပြင်တာမျိုးပေါ့ ။
Access လုပ်တာများတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေအတွက်သာ Mongo သုံးပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ဆွေးနွေးပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။
I would really appreciated any of your suggesstions ! Thanks ...
အကြံပေးပါဆိုရင်တော့ ၁ မျိုးပဲသုံးပါ မလိုအပ်ပဲ ၂ မျိုးမသုံးပါနဲ့ လို့ပဲအကြံပေးရမှာပါ။ မတူညီတဲ့ Data Model ၂ ခုသုံးရမှာဖြစ်လို့ Development Cost ၂ ဆနီးနီး တက်လာမယ် Sourcecode size လည်း တက်လာမယ်။ Lines of code နဲ့ Bugs ရဲ့ correlation ဟာ exponential အထိဖြစ်နိုင်တယ်။ Performance ကတော့ ဘာပဲသုံးသုံး ရအောင်တော့ ညှိလိုရပါတယ်။ ဘာသုံးမလဲကတော့ ကိုယ့်ဆီမှာရှိတဲ့ human resource ကိုကြည့်ပေါ့ MySQL ကို Tune လုပ်နိုင်မယ့်လူရှိရင် MySQL သုံးပေါ့ မဟုတ်ရင်တော့ Maintenance Cost နည်းတဲ့ MongoDB သုံးပေါ့ အဲဒါကတော့ ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲ မသိတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ဆုံးဖြတ်ပါ။
Thanked by2DeathWings kaungkhantmintun